Mwedzi mitanhatu yeApple Music yemahara yekutenga AirPods kana Beats | IPhone nhau
Kukwidziridzwa kutsva kwevashandisi vatsva vanotenga AirPods, AirPods Pro, AirPods Max neBeats mahedhifoni anopinda munzvimbo. Mune ino kesi hatisi kujekesa kana kupihwa kuri kuwanikwa munyika dzese nekuti kukwidziridzwa hakuoneke pawebhusaiti yeApple kuSpain, zvirinani izvozvi. Izvo zvakakoshawo kutaura izvozvo inoshanda chete kune vatsva vatsva kuApple Music Saka kana iwe watove wakanakirwa nemwedzi wakasununguka weApple yekumhanyisa mimhanzi sevhisi, uku kusimudzira hakusi kwako.
Kugara uchikwidziridzwa paApple Music
Iyo yekusimudzira inoitwa nhasi uye izvozvo inogona kushandiswa mukati memazuva makumi mapfumbamwe ekutenga yechigadzirwa ndechimwe chezvizhinji zvinoitwa nekambani yeCupertino. Apple mabasa anowanzo kupa aya marudzi ekusimudzira nguva nenguva uye ino nguva inguva yeApple Music.
Chinhu chakanakisa pane zvese izvi ndechekuti yekutenga AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro kana Beats Solo Pro, iwe uchagamuchira hafu yegore yeApple Music yakavhurika kuti unakirwe nezviuru zvenziyo. Mupfungwa iyi, chinhu chakakosha ndechekuti vashandisi shandisa sevhisi, gara mukati uye ugare uchibhadhara kubhadhara. Kukunda vatengi ndiyo hwaro hwerudzi urwu rwekusimudzira.
Nhasi uno akasiyana masevhisi ekushambadzira masevhisi anopa akasiyana akasiyana mimhanzi uye vese vari zvakaenzana kunyangwe maererano nemhando uye huwandu hwemimhanzi huripo. Apple Music, Spotify kana Amazon Music ndidzo dzinotungamira munyika medu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Mwedzi mitanhatu yemahara Apple Music yekutenga AirPods kana Beats